Bangs တွေကိုဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲ။ | Bezzia
Susana godoy | 07/07/2021 12:00 | လှပမှု
သင်ပွင့်လင်း Bang ကိုဖြတ်ဖို့ဘယ်လိုသိသလား ကျွန်တော်တို့မှာ Bangs အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ သို့သော်သဘာဝတရားကိုပိုမိုဆောင်ကြဉ်းပေးသောအရာတစ်ခုရှိလျှင်၎င်းသည်လူတိုင်း၏နှုတ်ခမ်းတွင်အမြဲရှိနေသည်ဆိုပါက၎င်းသည်ထူထဲ။ မလိုအပ်ဘဲလွတ်လပ်စွာရွေ့လျားသွားနိုင်သည့်ပွင့်လင်းသောမြိတ်ကဖြစ်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံကျော့ကွင်း၌တွေ့ရသည့်အတိုင်းပျက်စီးမှုအတွက်နောင်တမရဘဲအိမ်တွင်အဆင်ပြေစွာမည်သို့ဖြတ်တောက်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။ တစ် ဦး လမ်းကြောင်းသစ်အဖြစ်ပြန်လည်နေရာချထားဒါကအချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းကလာသောသူတို့အားဖက်ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်ပေမယ့်။ ၎င်းသည်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဖြစ်ပြီးယခုတွင်သင်သည်မျက်လုံးမှိတ်။ ကြည့်နိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဘယ်လိုပြောပြ!
1 ပွင့်လင်း Bang ဆိုတာဘာလဲ
2 ပွင့်လင်း Bangs ဖြတ်ဖို့ဘယ်လို
3 Bangs အတွက်ရိုးရှင်းသောချီတက်ပွဲလုပ်နည်း
ပွင့်လင်း Bang ဆိုတာဘာလဲ
၎င်း၏အမည်ကိုဖော်ပြသည်အတိုင်း ၎င်းကို BANG အမျိုးအစားဟုခေါ်သည်။ အများအားဖြင့်အလယ်နှင့်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ဆံပင်ကိုခွဲထားခြင်းကြောင့်ဆံပင်သည်အနည်းငယ်ပိုရှည်သည်။ ဒါကြောင့်လည်း ၀ တ်ဆင်ထားတဲ့အခြားတီးဝိုင်းအမျိုးအစားများရဲ့သိပ်သည်းတဲ့အဆုံးကိုချန်ထားလိုက်သည်။ ဒီကိစ္စမှာငါတို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတဲ့အတိုင်းငါတို့အမွေအနှစ်တွေအများကြီးကျန်နေစေတဲ့ပါရီမြို့ရဲ့ဖက်ရှင်ကိုပြန်သွားရမယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြီးကျယ်တဲ့ Brigitte Bardot ကအဲဒီအချိန်ကခေတ်မီအောင်လုပ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်ထိုအတွေးအခေါ်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုထင်ရသည်။ အခြားအခြေခံအချက်များမှာ၎င်းသည်ဆံပင်အမျိုးအစားအားလုံးကို ပိုမို၍ ပိုမိုပါးလွှာသောသို့မဟုတ် ပို၍ ထူသောဆံပင်များနှင့်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ သင်မည်သို့ဖြတ်နိုင်သည်ကိုသင်သိလိုပါသလား။
ဖွင့်လှစ် Bangs ဖြတ်ဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်, ငါတို့ဆံပင်ကောင်းစွာဖြီးနှင့်ရှေ့ဆက်ဖြန့်ဖြူးရပေမည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Bangs ဖြစ်လတံ့၏။ ငါတို့လိုချင်သောဆံပင်၏ပမာဏကိုရွေးချယ်ရမည်။ ဖြီး၏အကူအညီဖြင့်၎င်းကိုအပေါ်ဘက်ခြမ်းသာမကမျက်နှာ၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ပုံဖော်လိမ့်မည်။ ဒီမှာကတည်းကငါတို့လိုချင်တဲ့အထူပေါ်မှာမူတည်တယ်။ သင်ရွေးချယ်လိုက်သည့်အခါဆံပင်ညှပ်နေစဉ်ကာလအတွင်းအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရန်ကျန်ဆံပင်ကိုစုဆောင်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ယခုသင်သည်ဆံပင်ကိုစိုစွတ်ပြီးရှေ့သို့ကောင်းစွာဖြီးပါ။ ယခုတွင်ကတ်ကြေးကိုင်ရန်၊ အလယ်တွင်အချပ်များကိုဖွင့်ရန်၊ ကြိုးတစ်ချောင်းကိုယူပြီးဆန့်ကျင်ဘက်ဘက်သို့ဆန့်ရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာကျနော်တို့အကြံပေးချက်များကိုဖြောင့်ဖြတ်လိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကအမြဲတမ်းဗဟိုရဲ့အစိတ်အပိုင်းမှာအမြဲတိုတောင်းပေမယ့်ဘေးချင်းမှာပိုရှည်နေဖို့ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကြိုးမျှင်တစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်ပါကနောက်တစ်ခုနှင့်လည်းအလားတူလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းကိုယူ။ ဖြောင့်ဖြတ်လိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အမြဲတမ်းအဆင်သင့်မဖြစ်သေးသည့်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့အနည်းငယ်ဖြတ်သင့်သည်မှာမှန်သော်လည်း၎င်းသည်သင်လိုအပ်သောအရှည်ကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ငါဘယ်လိုထပ်လုပ်ရမလဲ။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
ကျနော်တို့လိုချင်သောအရှည်နှင့်အတူဘန်းပြီးတာနဲ့သင်အမြဲတမ်း parading သို့မဟုတ်တုံးတချို့လုပ်နိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့်တကယ်မဖြောင့်ဘူး ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ဆံပင်ကိုလွတ်လပ်မှုအနည်းငယ်ပေးသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သင်သည် Bangs နှင့်၎င်း၏အလယ်ဗဟိုအပိုင်းအစတစ်ခုကိုယူပြီး၎င်းကိုသူ့ဟာသူလှည့ ်၍ ကတ်ကြေးများကိုအလွန်ဒေါသမထွက်စေရန်ဒေါင်လိုက်နေရာချပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကတ်ကြေးတွေဖြတ်သွားမယ်။ ဆံပင်အနည်းငယ်တိုသည်အလယ်ဗဟိုတွင်အသံအနိမ့်အမြင့်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်သဘာဝကိုလောင်းခြင်း အထူကိုဘေးဘက်ပိုင်းများ၌ပိုမိုစုစည်းပြီးဗဟိုဗဟိုတွင် ပို၍ နည်းသည်။ နောက်ဆုံးတော့သင်ကပုံသဏ္littleာန်အနည်းငယ်ပေးရုံဖြင့်လုံးဝပွင့်ပွင့်လင်းလင်းယူရမည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သောသဘာဝအပေါက်ငယ်များဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။ ဒီ Bangs စိတ်ကူးကိုကြိုက်လား?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လှပမှု » ပွင့်လင်း Bangs ဖြတ်ဖို့ဘယ်လို